Budata Tenorshare Free WhatsApp Recovery maka Windows
Budata Tenorshare Free WhatsApp Recovery
Free Budata maka Windows (21.08 MB)
Budata Tenorshare Free WhatsApp Recovery,
Tenorshare Free WhatsApp mgbake bụ ngwa mgbake mkparịta ụka WhatsApp ehichapụ na-enyere ndị ọrụ iOS aka ị nwetaghachi ozi WhatsApp ehichapụrụ nefu.
WhatsApp na-echekwa akụkọ nkata na-akpaghị aka na ozi ndị enyi anyị na-arụ ọrụ ya. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ozi dị ka okwuntughe na ọnụọgụ dị mkpa ozugbo, anyị nwere ike ịnweta ozi a ozugbo site na ilele akụkọ nkata. Agbanyeghị, mgbe ehichapụ akụkọ nkata ahụ maka ebumnuche dị iche iche, ozi a dị mkpa na-efunarị ya.
Tenorshare Free WhatsApp Iweghachite na-enye anyị ohere ị nwetaghachi ozi a dị mkpa nefu. Na usoro ihe omume, anyị nwere ike naghachi WhatsApp ozi na 2 dị iche iche ọnọdụ. Mbụ, site na ijikọ anyị iOS ngwaọrụ na anyị na kọmputa, anyị nwere ike ozugbo naghachi ehichapụ ozi WhatsApp. Nke abuo, anyị nwere ike naghachi WhatsApp ozi echekwara na ndabere faịlụ kere iTunes na anyị na kọmputa. Nke abụọ usoro bụ karịsịa bara uru na ikpe ebe anyị iOS ngwaọrụ na-adịghị achọpụtara site iTunes mgbe ejikọrọ na kọmputa, na-ahụ mebiri emebi ma ọ bụ na-ezu ohi na-efu.
Agbanyeghi na Tenorshare Free WhatsApp Iweghachite nwere ike depụta kọntaktị ndị emere akwụkwọ ozi ahụ, ọ na-enye anyị ohere idetu ederede ederede. Site na Tenorshare Free WhatsApp mgbake, anyị nwere ike ịlele nlele nke mkparịta ụka ahụ ka anyị wee nwee ike ịmata mkparịta ụka anyị chọrọ ịgbake ngwa ngwa.
Tenorshare Free WhatsApp Iweghachite nwere ike naghachi data site na ngwaọrụ dị ka iPhone 5S, 5C, 5 na 4S, iPad 4, Ikuku na Obere, iPod Touch 5G.
Tenorshare Free WhatsApp Recovery Ụdịdị
Nha faịlụ: 21.08 MB